I-Acoustic Foam, isithintelo sesandi, i-Acoustic Diffuser-iVinco
Iphaneli yelizwi le-acoustic
Iphaneli ye-acoustic yomthi
Iphaneli yePolyester acoustic
Iphaneli yoboya beenkuni
Izinto eziXhomekekayo kwizandi
Ubunzima belayishe i-vinyl
Ukungena ngaphantsi kwesandi
Izixhobo zokuthintela isandi
Amagumbi okufundela nezikolo
Ihotele kunye neeeresityu
Ulwazi lokwambathisa isandi
I-Shenzhen Vinco izixhobo zokuthintela isandi Co., Ltd ikhethekileyo kwimathiriyeli yokuthintela isandi iminyaka emininzi kwaye ibonelela nge-R & D, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo emva kokuthengisa kweemveliso.
Iimveliso zeVinc zigubungela isahlulelo somsebenzi, iipaneli zokuthintela ukuvakala kwesandi, amagwebu okungqinisisa isandi, ukungqinisisa isandi somgangatho womgangatho, ukuvala isandi, ukuqinisa umbhobho, iipaneli ze-acoustic, ukugquma kwe-acoustic, iipaneli zokufunxa izandi, izinto zokugquma, amagwebu atsalela isandi njl.
UVinco ujolise kumandla endawo ngelixa ejonge umhlaba, i-duo kulwakhiwo olomeleleyo, umgangatho onokuthenjwa kunye nokusebenza kwexabiso eliphezulu, iimveliso zeVinco havd zithandwa kakhulu ngabathengi.
Sineseti epheleleyo yoomatshini abalawulwa ngokuzenzekelayo ziikhompyuter kunye nabasebenzi bobuchwephesha bokuqinisekisa imveliso yethu ikumgangatho ophezulu. Intengiso yethu yonyaka inokufikelela kwi-500,000 yeemitha zesikwere seZinto zokuNqanda iiMveliso, iiMveliso ze-Acoustic, ulwahlulo oluhambisekayo, Izinto eziHlanganisiweyo. Wamkelekile ukuba utyelele umzi-mveliso wethu wokwakha ubudlelwane bexesha elide kunye nentsebenziswano. Siza kukunika eyona nkonzo ibalaseleyo, umgangatho ophezulu kunye nexabiso lokhuphiswano.
• 2015-Ukwandiswa kwesikali semveliso, ukuthengiswa kwenyanga ngaphezulu kwe-200,000 yeemitha zesikwere semathiriyeli ye-acoustic
• 2012-Inkampani inengxelo ezininzi zovavanyo lwe-acoustic.
• 2011-Iimveliso zeNkampani zithengiswa kwihlabathi liphela.
Ngo-2009 -Kufezwe iziQinisekiso ze-SGS, i-CE, i-CMA, i-ilac-MRA, i-CNAS.
• 2007 -Ukuvulwa kwefektri yeZinto zokuNqanda isandi eShenzhen kwaye kwaqala imveliso enkulu.
• 2003-Yasekwa inkampani yaseShenzhen Vinco yezixhobo zokuthintela isandi.
Umgangatho yenye yezona zinto ziphambili kuthi.
Qhubeka uphucula inqanaba lolawulo ukwenza abathengi baqiniseke.
Ulawulo olungqongqo ngokungqinelana nemigangatho yokuqinisekisa i-100% yenqanaba elifanelekileyo lomgangatho wokuhambisa.
Umbono:Ukuba ngumhlobo othenjiweyo wabathengi behlabathi. Ukuhambisa ixabiso eliphezulu kubathengi, abasebenzi kunye nabanini zabelo.
Umnqophiso: Ukubonelela ngeenkonzo ezikumgangatho ophezulu, ngexesha elifanelekileyo kunye nolwanelisayo kwi-acoustics yokuvelisa iphaneli kunye nokudibana.
yeyiphi imboni esiyisebenzelayo
Iimveliso zeVinc zigubungela ukwahlula umsebenzi, iiphaneli zokuthintela ukuvakala kwesandi, amagwebu okungqinisisa isandi, ukuthintela isandi somgangatho womgangatho, ukuvala isandi, ukuqinisa umbhobho, iipaneli ze-acoustic, i-acoustic insulation, iipaneli zokufunxa izandi, izinto zokugquma, amagwebu okufunxa isandi njl.
Ukugcinwa kwebhodi yokuhambisa isandi, ukugcinwa kwansuku zonke kunye neendlela zokucoca
Izibonelelo ezilishumi zeemveliso zebhodi ezithatha isandi
(1) Ukungena kwamanzi kunye nobungqina bokufuma. Ingxaki iimveliso iinkuni bei ...
Buyintoni ubuchwephesha bokwakha bebhodi efunxa isandi?
1. Yintoni inkqubo yokwakha yebhodi efunxa isandi? C ...
/ Ukwahlula njani umgangatho weepaneli ezifunxa isandi? Jonga nje iinkalo ezi-6
Umgangatho weepaneli zokufunxa isandi umisela isandi ...
Ulwazi lokuvala isandi
Ungazikhetha njani izinto zeacoustic? Kwaye ukusetyenziswa okungafaniyo
Izinto ezintathu eziqhelekileyo ze-acoustic Acoustic materials (ikakhulu zibhekisa ...
Amalungiselelo okuqala okufakelwa kweepaneli zomthi ezifunxa isandi
Oku kulandelayo ngumsebenzi wokulungiselela ukufakelwa ...
Indlela yokukhetha izinto zokwambathisa ekhaya?
Iindlela ezintlanu eziqhelekileyo zokugquma, ezifuna ukulungiswa apha ...
Uyenza njani indonga engaphakathi enesandi? Loluphi uhlobo lodonga olungangenisandi olulungileyo?
Uyenza njani indonga engaphakathi enesandi? 1.Ukubekwa kwelastiki ...
Ukusetyenziswa kwangaphakathi yintoni into efanelekileyo yokufaka isandi?
Zininzi izinto zokwambathisa izandi zangaphakathi, kwaye zikhona ...
Iiphaneli zokufunxa izandi zinezixhobo ezizodwa ezahlukeneyo
Uhlobo lokuqala lwebhodi-polyester ifayibha yesandi-...
I-Shenzhen Vinco izixhobo zokuthintela izandi Co., Ltd. eneemfuno ezizodwa izixhobo soundproofing iminyaka emininzi kunye nokubonelela R & D, imveliso, ukuthengisa kunye nenkonzo emva-ukuthengiswa iimveliso.
Idilesi: Indawo yoShishino, iZiko leBaoYunda, iXixiang Road, iXixiang Idolophu, iSithili saseBaoan, iShenzhen, China.